Semalt: भियाग्रा स्पाम के हो?
इगोर गामेनेन्को, Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक, भन्छन् कि त्यहाँ रूसी ह्याकर्सको एक विशेष समूह छ जसले बोटनेट उत्पन्न गर्ने रेफरल स्प्याम विकास गरेको छ। यस स्पाम आक्रमणमा ईमेल पठाउन समावेश छ जुन भायाग्रा वा पुरुष अंग विस्तार औषधि जस्ता उत्पादनहरू खरीद गर्न प्रस्ताव गर्दछ। यस स्पाम आक्रमणले संसारको स्प्याम ईमेलहरूको एक तिहाइ कभर गर्न प्रबन्ध गरेको छ। यस योजनाको पछाडि आक्रमणकारीहरू, दुवै पैसा कमाउन कानूनी र गैरकानुनी तरिकाको सहारा लिन्छन्। सबै भन्दा पहिले, यी नक्कली कलहरू थिए जसले मानिसहरूलाई स्क्याम साइटहरू खरीद गर्न आवश्यक गर्दछ। दोस्रो, यी स्प्यामरहरूले उनीहरूको असुरक्षित पीडितहरूलाई भारत वा रसियाबाट बनाएको जाली औषधि पठाउँछन्। लामो कथा छोटो काट्नका लागि, लाखौं प्राप्तकर्ताहरूलाई ईमेल पठाईयो, हजारौं बिक्री नभए पनि सयौं बनाउने आशामा।
जब यी अपराधीहरूले यी अपराधहरू गरिरहेका थिए, उनीहरूले पीडितको कम्प्युटरमा मालवेयर र भाइरसहरू चलाए। ह्याक गरिएको मेसिनले राम्रोसँग कार्य गरेन र आक्रमणकारी आदेशहरू मात्र पालना गर्दछ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने पीडितहरू मुख्यतया अमेरिकीहरू हुन्। आक्रमणकर्ताको पहिलो आदेश ईमेल ठेगानाहरू स collect्कलन गर्न र मान्य प्राप्तकर्ताहरूको सूची बनाउनु थियो। सम्पूर्ण योजना बोटनेट आक्रमणको रूपमा कार्यान्वयन गरियो। विस्तृत अनुसन्धान पछि, यस आक्रमण पछाडि केहि व्यक्तिहरू हिरासतमा लिए। यद्यपि, मेरो विचारमा, भियाग्रा-स्प्याम रोकिएन, र हामी भविष्यमा थप ह्याकर आक्रमणहरू आशा गर्न सक्छौं।
कसरी स्पामले काम गर्दछ
क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसार धेरै बैंकहरू र आपूर्तिकर्ताहरूले यी केही भियग्रा स्पाम ईमेलहरू फैलाउन सहयोग गर्दछन्। यसको मतलब यो हो कि अनलाइन फार्मा प्रोजेक्टहरू पछाडि केहि दलहरू यी औषधि उत्पादनहरूको ड्राइभ बिक्रीमा रुचि राख्छन्।
अध्ययनको क्रममा, अन्वेषकहरू र पत्रकारहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् कि स्प्यामरहरू उनीहरूको खराब योजना लागू गर्न निम्न विधिहरू प्रयोग गर्दछन्:
परम्परागत डिजिटल मार्केटिंग विधिहरू जस्तै, आक्रमणकर्ताहरू उत्पादनलाई अनलाइन प्रचार गर्न एक विधिको रूपमा विज्ञापन प्रयोग गर्छन्। सामान्यतया, यी आक्रमणकर्ताहरूले स्प्यामिंग ब्लगहरू, सोशल मिडिया, सर्च इञ्जिन अप्टिमाइजेसन, आदि द्वारा सम्भावित खरीददारहरू सम्म पुग्ने प्राथमिक तरिकाको रूपमा प्रयोग गरे। विज्ञहरूले उल्लेख गरे कि आईपी ठेगाना मोनिटरिंग द्वारा वेबसाइट प्रयोगकर्ताहरूलाई नियन्त्रण गर्न व्यापक प्रगति गर्न सक्छ र प्रयोगकर्ताहरूलाई यी आक्रमणहरूबाट टाढा रहन मद्दत गर्दछ। । अफसोस, तथापि, यो अनुमान गरिएको छ कि सबै ग्लोबल ईमेलहरूको %०% अझै स्पाम हो।
२. समर्थन क्लिक गर्नुहोस्
आक्रमणकारीहरूले उनीहरूको ईमेलमा दुर्भावनापूर्ण वा फिसि links लिंक राखेर प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको वेबसाइटमा पुनःनिर्देशित गर्न यो विधि प्रयोग गर्दछ। तिनीहरू अनलाइन औषधि पसलहरूसँग लि link्क हुन्छन्, जसले ग्राहक आदेशहरू स्वीकार र प्रसोधन गर्दछन्। सामान्यतया, यो भाग स्वतन्त्र संस्थाहरू द्वारा कार्यान्वयन गरिन्छ जसमा स्पाम प्रेषकहरू र बोटनेट मास्टरहरूसँग केहि मिल्दोजुल्दो छैन। धेरै जसो केसहरूमा आक्रमणकर्ताहरू यी वेबसाइटहरूको सम्बद्धको रूपमा काम गर्छन्, जहाँ उनीहरूले कुल बिक्री रकमको to० देखि 50०% सम्म प्राप्त गर्छन्।